झन्डै १८ अर्बमा विक्री भयो मर्सिडिज बेन्जको ६७ वर्ष पुरानो रेसिङ कार, प्रतिघण्टा गति १८६ माइल* ! | आर्थिक अभियान
झन्डै १८ अर्बमा विक्री भयो मर्सिडिज बेन्जको ६७ वर्ष पुरानो रेसिङ कार, प्रतिघण्टा गति १८६ माइल* !
२०७९ जेठ, ६
र यो पनि यातायात
फोटो : सिएनबीसी
काठमाडौं (अस) । जर्मन अटो निर्माता कम्पनी मर्सिडिज बेञ्जले भर्खरै विश्वकै सबैभन्दा महँगो मूल्यमा कार बेचेको छ ।
कम्पनीले आफ्नो कलेक्शनमा रहेको १९५५ को रेसिङ कार मर्सिडिज बेन्ज ३०० एसएलआर उलेनहउट कूपे मे ५ मा १४ करोड २० लाख डलर (१७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) मा विक्री गरेको छ ।
कुनै कारले यति धेरै मूल्य पाएको यो नै पहिलो पटक भएको संग्रह गरेर राखिएका कारको मूल्यको लेखाजोखा गरेर राख्ने एउटा कम्पनी ह्यागर्टेले भनेको छ । सो कार बेचेर आएको पैसाले कम्पनीले मर्सिडिज बेन्ज कोष खोल्नेछ । यो अन्तरराष्ट्रिय छात्रवृत्ति कोषको रकमलाई कम्पनीले वातावरण विज्ञान र डिकार्बोनाइजेशन अध्ययन गर्न चाहने युवा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन खर्च गरिनेछ ।
यस अघि सबैभन्दा धेरै मूल्यमा विक्री हुने कार १९६३ को फेरारी २५० जीटीओ थियो । सन् २०१८ मा सो कार ७ करोड डलरमा विक्री भएको थियो । विक्री भएको कार कम्पनीले बनाएको ३०० एसएलआर उलेनहउट कूपे कारको दुई प्रोटोटाइपमध्ये एउटा भएको बताइएको छ ।
सो कारको नाम कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख इञ्जिनियर रुडोल्फ उलेनहउटको नामबाट राखिएको हो । यो कारको उच्चतम् गति प्रतिघन्टा १८६ माइल भएको बताइएको छ । यो त्यति बेलाको सबैभन्दा तीव्र गतिको कार हो । अर्को उलेनहउट कुपे भने स्टुटगार्टस्थित संग्राहलय रहने कम्पनीले बताएको छ ।
सन् १९३० देखि १९५० को दशकका रेसिङ कारहरु दूर्लभ छन् । अधिकांश कार कारखानाकै स्वामित्वमा छन् । त्यसैले बजारमा लिलामी वा विक्रीका लागि उपलब्ध गराइने कारको माग अति नै उच्च हुने ह्यागेर्टीका अटोमोटिभ इन्टेलिजेन्सका उपाध्यक्ष ब्रियन राबोल्ड भन्छन् । कम्पनीले रेसिङ कारको रुपमा बनाएको थियो । तर सन १९५५ मा मर्सिडिज बेञ्जका चालकको मृत्यु भएपछि कमपनीले रेसिङ एकाई बन्द गर्यो ।
यसको अर्थ ३०० एसएलआर उलेनहउट कूपेलाई कुनै प्रतिस्पर्धामा प्रयोग गरिएको छैन । कारको लिलामी विक्री मे ५ मा मर्सिडिज बेञ्जको स्टुटगार्टस्थित संग्राहलयमा बन्द बोलकबोलबाट गरिएकोले नयाँ मालिकको नाम गोप्य राखिएको छ । क्रेताले कारलाई विशेष अवसरहरुमा सार्वजनिक रुपमा प्रदर्शनका लागि राख्न सहमति गरेको बताइएको छ । कम्पनीले यस अघि ३०० एसएलआर उलेनहउट बेच्न अस्वीकार गर्दै आएको थियो ।
*यस अघि माइल हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ - सम्पादक
अब सवारी सुरक्षा जाँच एनसीएपी भारतमै हुने, क्र्यास टेस्ट रेटिङले कारको सुरक्षा निर्धारण गर्ने [२०७९ असार, १५]
महिन्द्रा स्कर्पियो- एन भारतीय बजारमा सार्वजनिक, अन्य कारको सस्तो विकल्प बन्न सक्ने [२०७९ असार, १३]
नेपाली बजारमा ‘निटा भी’को मूल्य स्वाभाविक : सीजी मोटर्स [२०७९ जेठ, २७]
चौतर्फी विरोधपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबारे सरकारी बोली फेरियो, 'सबै गाडीमा राख्ने भनेको होइन' [२०७९ जेठ, २४]
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा जबर्जस्ती बन्द होस्, नभए नागरिकले अवज्ञा गर्नेछन् : सांसद गगन थापा [२०७९ जेठ, २३]
विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा सांग्रिला बैंकको प्रोत्साहन [२०७९ जेठ, २३]
[May 20, 2022 07:29am]
per hrs 186 mtr. pani hunxa ra ? manxe pani 1 hrs ma5km 5000 mtr ta hidxa. tyo ta racing car k vaneko ?